Ukuthukuthela nokukhathala - lezi zimo ezimbili zihamba ndawonye. Uma sikhathele, kulula kakhulu ukuthukuthela, kodwa uma sithukuthele, sisuke sikhathele ngokushesha. Ukukhathala kuvame ukuvela ngenxa yokuthi kokubili isikhathi samahhala nesisebenza ngokuhlelekile. Indlela yokukhipha ukucasula, izikhambi zabantu esizifunda kule ncwadi.
Lapho indawo yokusebenzela ihlelwe ngendlela engafanele, futhi umsebenzi uyingqayizivele futhi unesizotha, siqoqa amacala amaningi okuphuthumayo, okudingeka siwenze ngokuphuthumayo. Khona-ke ukucasuka nokukhathala okungapheli ngeke kuthathe isikhathi eside. Umuntu ohlala njalo futhi esebenza ezimweni ezinjalo, uvame ukuqala ukukhathazeka, ubuthakathaka obuvamile, isimo sakhe sengqondo sivame ukushintsha - okokuqala uyathukuthela, bese eqala ukungabi nalutho futhi enganaki.
Abantu bazola ngezindlela ezehlukene: umuntu udla izinto ezihlukene, umuntu uthola imbewu, aphume, ngakho-ke azinikele ngokwabo ngenxa yokucindezeleka abaye bakhuthazela. Abanye abantu babalelwa kuyishumi, benza umzimba wokuzivocavoca, baphefumule ngokujulile, bese uzama ukuphazamisa ngandlela-thile.
Kunzima ukuzola lapho usuvele uthukuthele, kodwa akudingeki ulinde ukuphazamiseka kwemizwa. Kungcono ukungavumeli leli zwe, ngoba usadinga ukuzihlonipha wena nothando, abanye bayokuphatha kangcono.
Ungasusa kanjani ukucasula?
- Zama ukwenza imisebenzi ehlukile: kuqala wenze umsebenzi owodwa, bese ushintsha amaminithi kuya ku-10-20 ngomunye umsebenzi. Kungcono ukwenza umsebenzi ohlukile wokucindezeleka kwengqondo.
- Uma usebenza ekhaya, phuma uye emgwaqweni, isibonelo, ngesinkwa noma uhlanza. Ukuvula i-TV, ungacabangi ukuthi ukhululekile kakhulu, awungeze enhlalakahleni yakho futhi ujabule. Isikhathi esithile ehhovisi, ungashintsha into eyodwa komunye.
- Nsuku zonke kufanele uphuze ngaphezu kwengxenye yelitha yamanzi ahlanzekile. Amanzi enza umzimba wonke uphumule, emzimbeni ahlanjululwa imikhiqizo yokubola, eqoqa ngaphansi kwethonya lokucindezeleka, amanzi abuyela esimweni esivamile ukulinganisela kwe-acid-base.
- Uma umuntu ehlala ebizwa nge-nedosypaet futhi engayinaki, uhlala ekhululekile. Khona-ke ukucasuka kuba yinto evamile yokuziphatha kwakhe, futhi lapha ngeke kube khona ukukhuluma ngesifiso sokusebenza. Ukuze uzizwe ukhululekile futhi uzolile, udinga ukulala okungenani amahora angu-6 ngosuku. Abanye abakunaki lokhu, kodwa ngaphandle kokulala okuvamile, angeke kube khona impilo nempilo emihle. Ventilate egumbini ngaphambi kokulala, alale phansi bese uvuka ngesikhathi esifanayo. Ungakhohlwa ukuthi udinga ukulala kuphela emnyama futhi uthule.
Ukunakekelwa kokulungiswa kwamakhambi abantu
Ikhambi elilula lokucasula yilona: i-decoction ye-coriander imbewu. Ukupheka ngamanzi okugeza, njengamanye amakhambi, thatha isipuni 1 sembewu ye-coriander uphinde uthele indebe eyodwa yamanzi abilayo. Sigcina ukumnika emanzini okugezela ngamaminithi angu-15, bese upholile eminye imizuzu engu-45 ekamelweni lokushisa. Ukumnika i-percolate futhi uphuze izipuni ezingu-3, ​​izikhathi ezine ngosuku. Ezinsukwini ezimbalwa sizobona ukuthi umhlaba uqale ukushintsha ukuze kube ngcono, futhi ukuvutha okujwayelekile, okufana nezinto ezihlakazekile noma izitsha ezingahlanjululwa, akusenzi ukuthukuthela.
Iqoqo elithokozayo kusuka empandeni ye-valerian, i-motherwort, i-caraway kanye ne-fennel izosiza ekuqedeni ukucasuka, ibe yilapho ihlaziywa futhi ihlaziye. Ukuze wenze lokhu, thatha lezi zitshalo ngesilinganiso esifanayo, uhlanganise futhi uthele iqoqo elilodwa lezipuni zamanzi we-400ml amanzi abilayo, ubambelele, uphuze futhi uphuze izikhathi ezintathu ngosuku ngamaminithi angu-50. Uma sizizwa ukuthi ukukhathala, ukucasuka, asikwazi ukulala, sizophuza ingxenye eyengeziwe yokumnika. Kakade ngosuku lweshumi isimo sithuthuka.
Ukumnika umama we-motherwort ngelamula kuzosiza ukubuyisela ukulinganisela nokuzola. Lungise ngokwakho: mix 1 isipuni isipuni motherwort kanye rind of lemon eyodwa. Khona-ke sizogcwalisa le ngxube ngenye ingilazi yamanzi abilayo bese sifaka amahora angu-3 ezitsha zokugcoba nesembozo esivaliwe. Sithatha i-dessert spoon ngemuva kokudla, izikhathi ezine ngosuku.
Abantu abaningi endlini yezwe noma izivande zemifino bakhula isitshalo esingapheli, okubizwa ngokuthi ikhukhamba utshani. Ukumnika lo muthi kahle kusiza ngokuthukuthela, izinzwa, imizwa emibi nokulala. Ukuze wenze lokhu, thatha zonke izingxenye zesitshalo - isitshalo, izimbali, amaqabunga - aphule, uhlanganise bese uthatha izipuni ezimbili zaleli qoqo bese uzigcwalisa ngeglasi eyodwa yamanzi abilayo. Sifaka amahora angu-4, bese sihlunga, sithatha izipuni ezimbili zokumnika izikhathi ezingu-6 ngosuku ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelashwa okunjalo iviki elilodwa.
I-tincture ephumelelayo kakhulu futhi enhle kakhulu yemifula kanye nezinye izinongo, iqinisa isimiso sezinzwa. Sizogeza ingilazi eyodwa yezithelo zomuthi we-prune, uyibeke epanini, uthele uhhafu wamitha ka-cahors, uwushise ngomlilo omncane, wengeze iziqholo: ama-pea omnyama we-pepper, ama-3-4 amaqabunga ama-clove, iqabunga elingu-1, amaqabunga ama-½ e-cardamom. Khona-ke sisusa ingxube emlilweni, simboze futhi siyiphole. Siphuza ngaphambi kokulala, futhi angaphezu kuka-40 ml.
Ukuze ususe ukucasuka, thatha izipuni ezingu-1, 5 zamabhamondi noma ama-walnuts, ama-3 amakhemikhali, ama-2/3 wezipuni ze-valerian ne-hawthorn, ama-gramu angu-500 enju. Zonke izithako zidluliselwa nge-grinder yenyama noma ezichotshoziwe ku-blender, sigcina ingxube esiqandisini; sisebenzisa isipuni esisodwa ngaphambi kokulala futhi ngaphambi kokudla imizuzu engu-15.
Kathathu ngeviki sibhebha ngamakhambi - asishisa kakhulu. Brew in litre elilodwa lamanzi abilayo for 1 isipuni motherwort, yarrow ochotshoziwe, root root, ukuphikelela, ukuhlunga bese uthele ebhodini. Sithatha amanzi okugeza cishe isigamu sehora, engeza amanzi ashisayo, kodwa ukuthi ukushisa kwakho kwakumnandi. Ngokuvamile izikhumba ezinjalo eziyi-3 noma ezi-4 zanele ukuzizwa zizinzile.
Manje siyazi ukuthi singakhipha kanjani ukucasula ngamakhambi abantu.
Ukupheka kwabantu ngezinhloko
Isitshalo sezokwelapha se-sea-buckthorn
Amakhambi omphakathi wezinhlungu zenhliziyo
Izakhiwo zokuphulukisa ze-blueberries
Kusho ukuphatha ukuphazamiseka kwemizwa
Usizo lokuqala lokudla okunobuthi wengane encane
Konke mayelana ne-cellulite kusuka ekuboneni kwezokwelapha
Indlela yokulahlekelwa isisindo okhalweni ngokudla?
Ungasindisa kanjani umshado womndeni?
Ukugqoka isaladi lesiGreki
Ukupheka kwabantu ukuphathwa kwe-cholelithiasis
Amanzi okugeza, ama-folk remedies
Indlela yokugcoba kahle izinwele ku-curlers
Ama-muffin we-chocolate ane-cream ye-mint
Iresiphi ye-pancake Krumkake